उपत्यकामा अस्तव्यस्त ट्राफिक लाइट, मर्मत गर्न ढिलासुस्ती « Mero LifeStyle
उपत्यकामा अस्तव्यस्त ट्राफिक लाइट, मर्मत गर्न ढिलासुस्ती
सुमित्रा लुईंटेल	|| 21 July, 2021
काठमाडौँ उपत्यकामा ३८ वटा ट्राफिक लाइट जडान गरिएको छ । तर, कति चल्छन्, कति चल्दैनन् भन्ने सम्बन्धित निकाय नै जानकार छैनन् । अधिकांश चोकमा ट्राफिक लाइट राखिएकै छैन । लाइट राखिएको ठाउँहरुमा बिग्रिएको पनि महिनौं भइसक्यो तर, बन्न सकेको छैन । त्यसको गतिलो परिणाम भनेकै ट्राफिक जाम हो । जुन आम सर्वसाधारणले भोगिरहेका छन् ।
लाइट बिग्रिएपछि एकजना ट्राफिकले गर्न सक्ने कामका लागि ३, ४ जना खटाउनुपर्ने बाध्यता रहेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता एसपी सन्जिव शर्मा दास बताउँछन् ।
सवारी साधनलाई रोकिने र गुड्ने निर्देशन दिनका लागि चोक–चोकमा राखिएका ट्राफिक लाइट बिग्रिएपछि ट्राफिक प्रहरीले पनि सास्ती बेहोर्नु परेको छ । लाइट बिग्रिएपछि एकजना ट्राफिकले गर्न सक्ने कामका लागि ३, ४ जना खटाउनुपर्ने बाध्यता रहेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता एसपी सन्जिव शर्मा दास बताउँछन् । ‘लाइट भए पनि नभए पनि ट्राफिकहरुलाई सडकमा खटाउनु पर्ने नियम त छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, लाइट हुँदा केही सहज हुन्छ । सडकमा १ जना मात्र ट्राफिक प्रहरी बसे पुग्छ भने नभएको ठाउँमा ४ देखि ५ जना बस्नु पर्ने हुन्छ । ट्राफिक लाइटको व्यवस्था गर्ने काम सडक विभाग र महानगरको भएकाले यस विषयमा सडक विभागको ध्यान जान जरुरी रहेको दास बताउँछन् ।
‘ट्राफिक लाइटले यात्रुलाई बाटो काट्न, दुर्घटना क गराउन सहयोग गर्छ,’ उनले भने, ‘बिग्रिएका लाइटहरु तुरुन्त बनाउनु पर्छ ।’ अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा सडक विभाग अन्तर्गत १८ वटा र अन्य निकायहरुबाट २० गरेर जम्मा ३८ वटा लाइटहरु जडान भएका छन् । यसमध्ये अहिले अधिकांश बिग्रिएका छन् ।
चक्रपथस्थित नारायण गोपाल चोकमा लाइट बिग्रिएको महिनौं पछि मंगलबार साँझबाट सञ्चालनमा आएको छ । आखिर किन समयमै बन्दैनन् बिग्रिएका ट्राफिक लाइट ?
सडक विभागअन्तर्गत सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक शाखा प्रमुख कृष्णनाथ ओझा अहिले उपत्यकाका कहाँ कहाँ ट्राफिक लाइट बिग्रिएका छन् थाहा नभएको तर, थाहा हुने बित्तिकै मर्मत गर्ने गरेको बताउँछन् । विभागले अब ५ इन्टरसेक्सन र ८ वटा जेब्रा क्रसिङमा ट्राफिक लाइट राख्ने तयारी गरिरहेको छ । जुन साउन महिनाभित्र सकिसक्ने योजना रहेको उनी बताउँछन् ।
चक्रपथस्थित नारायण गोपाल चोकमा लाइट बिग्रिएको महिनौं पछि मंगलबार साँझबाट सञ्चालनमा आएको छ । आखिर किन समयमै बन्दैनन् बिग्रिएका ट्राफिक लाइट ? ओझालाई यो प्रश्न गर्दा उनी भन्छन्, ‘चक्रपथको लाइट काठमाडौँ महानगरले राखेको हो । महानगरले हामीलाई हस्तान्तरण गरेको छैन । तैपनि त्यहाँको ट्राफिक लाइट बनाउन हामीले निर्देशन दिएका थियौं, हिजोबाट सञ्चालनमा आयो ।’ अन्य ठाउँमा लाइट बिग्रिएको जानकारी नपाएको उनले बताए । तर, केशरमहल अघिको ट्राफिक लाइट बिग्रिएको पनि महिनौं भइसक्यो । बन्न सकेको छैन । यसैगरी, तिनकुने गैरिगाउँको ट्राफिक लाइट पनि कहिले सञ्चालन आउने कहिले नआउने भइरहेको हुन्छ ।
सडकमा ट्राफिक लाईट राखेपछि ट्राफिक जाम कम हुन्छ । यात्रुलाई बाटो काट्न सहज भएको छ । त्यसैले ट्राफिक लाइटहरुलाई विस्तार गर्ने कामका लागि सडक विभाग लागि रहेको ओझाले बताए । सहरी पूर्वाधार विभाग प्रमुख रामबहादुर थापा बताउँछन् नारायण गोपाल चोक माहाराजगञ्जमा रहेको ट्राफीक लाइट बिग्रीएर लामो समय नचलेको जानकारी नै नभएको बताउँछन् ।
अहिले उपत्यकामा जति पनि ट्राफिक लाइटहरु जडान भएका छन् ती सबै लाइट जसले जडान ग¥यो उसले नै मर्मत गर्ने भन्ने नियम छ । तर, त्यस्तो नगरेर ट्राफिक लाइटको मर्मत सम्भार गर्ने जिम्मा ट्राफिक प्रहरीहरुलाई नै दिने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको थापा बताउँछन् ।